ईसा पूर्व पाँचौ शताब्दीदेखि तेस्रो शताब्दीसम्म चीन युद्ध राज्यकाल अवधिमा थियो। त्यस बेला चीनमा धेरै रजौटाहरुको अधीनमा स-साना राज्यहरु थिए। उनीहरुका बीच पटक-पटक लडाईं भइरहन्थ्यो। त्यसैले ती स-साना राज्यहरुमा राजाका पक्षमा षडयन्त्र गर्ने केही षडयन्त्रकारी र बुद्धिमानहरु देखापरेका थिए। उनीहरुले राजालाई केही कुरा भन्दा गहन उपमा दिंदै राजालाई आफ्नो प्रस्ताव मान्न लगाउने गरेका थिए। " नान् युआन् पै ट" भन्ने कथा वै राज्यका भारादार ची ल्यांगले वै राज्यका राजालाई सम्झाउँदाको कथा हो। यहाँनेर श्रोताहरुलाई एउटा कुरा ब्याख्या गर्नु आवश्यक छ। नान् भनेको दक्षिण र युआन् भनेको गाडी तान्ने पशुलाई च्याप्ने दुइवटा लामा लट्ठी, पै भनेको उत्तर र ट भनेको गाडीको पांग्राको चिन्ह हो। पशुलाई च्याप्ने ती दुइवटा लामा लट्ठी अर्थात युआन्ले गाडी चल्ने दिशाको प्रतिनिधित्व गरेका छन भने ट भनेको गाडीको पांग्राको छाप नै हो। यो उखानबाट क्रियाकलाप र उद्देश्य विपरित भएको वा दुइ कुराको विकासको दिशा उल्टो भएको भन्ने अर्थ दिइएको छ।
युद्ध राज्यकालमा स-साना राज्यहरुले प्रभुत्व जमाउन खोजेका थिए। वै राज्यका राजाले विश्वमा प्रभुत्व जनाउने आकांक्षा लिए। उनले चाउ राज्यको राजधानी हान् तानलाई आफ्ना सामु आत्मसमर्पण गराउने विचार गरे। वै राज्यका भारादार वै ल्यांग अरु देशको भ्रमणमा गएका थिए। यो खबर सुनेपछि उनी निकै चिन्तित भए। उनी हतारपतार गर्दै वै राज्य फर्के र सिधै वै राज्यका राजाको दर्शन गर्न राजदरबार गए।
वै राज्यका राजाले चाउ राज्यमाथि हमला गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै थिए। चि ल्यांग धुलैधुलो भएका लुगा लगाएर हतारपतार गर्दै आएको देखेर राजाले अचम्म मानेर सोधेः तिम्रो के काम छ? हत्तपत्त मसँग भेट्न आएको, किन? लुगा-कपडा र टोपी पनि राम्रोसँग मिलाएनौ। चि ल्याङले भनेः " महाराज, भर्खरै बाटोमा मैले एउटा अचम्मलाग्दो कुरा देखेर हतारमा महाराजालाई सुनाउन आएको हुँ"। वै राज्यका सम्राटले निकै उत्सुकतापूर्वक सोधेः "के कुरा हो ? " चि ल्याङले जवाफ दिए: "भर्खरै मैले उत्तरतिर लागिरहेको एउटा गाडी देखें। मैले गाडीमा बसेको मानिसलाई सोधें: तपाईं कहाँ जानुहुन्छ?" त्यस मान्छेले जवाफ दियो: ठु राज्य जान्छु भनेर। मलाई अचम्म लागेर उसलाई सोधें ठु राज्य दक्षिणतिर पर्छ, किन तपाईं उत्तरतिर जाँदैहुनुहुन्छ? त्यो मान्छेले कुनै वास्ता नगरी जवाफ दियोः मेरो घोडा योग्य घोडा हो, जसरी दगुरेर पनि ठु राज्य पुग्नसक्छ। मलाई झन् अचम्म लाग्यो र उसलाई फेरि सोधें" तपाईंको घोडा जती योग्य भए पनि यो ठु राज्य जाने बाटो होइन।" त्यो मान्छेले भन्योः चिन्ता नगर्नोस, बाटोमा हिड्नका लागि मैले धेरै पैसा ल्याएको छु। मैले कुरा बुझिन र त्यो मान्छेलाई भनें: तपाईंले जति पैसा ल्याएको भए पनि यो ठु राज्य जाने बाटो होइन। मेरो कुरा सुनेर त्यो मान्छेले खित्का छोडेर हाँस्दै भन्योः "केही छैन, गाडी चलाउन र घोडा धपाउन म सिपालु छु।" छि ल्याङले वै राज्यका सम्राटलाई भनेः राजा त्यो मान्छे मेरो कुरा मान्दै मान्दैन। उ गाडी दौडाउँदै उत्तरतिर गइसक्यो। वै राज्यका सम्राटले उनको कुरा सुनेर हाँस्दै भनेः " संसारमा यति मूढ मान्छे छ र? " राजाको कुरा सुन्नेवित्तिकै चि ल्याङले भनेः "महाराज, सबै राजाका नेता बन्ने तपाईंको इच्छा छ भने संसारका मानिसहरुबाट पहिले नै विश्वास पाउनुपर्छ। तर अहिले तपाईंले चाउ राज्यभन्दा हाम्रो भू-भाग ठूलो र सेना शक्तिशाली भएको कारण आफ्नो प्रतिष्ठा बढाउन चाउ राज्यलाई आफ्नो हातमा पार्ने तपाईंको इच्छा छ। यसो गरेमा महाराजाको उद्देश्यबाट झन् टाढा गइनेछ। गाडी चलाउने मान्छे जस्तै दक्षिणतिर पर्ने ठु राज्य जानका लागि त्यो मान्छे उत्तरतिर गएको छ। यसो गरेमा उ जति अघि बढ्यो उति नै ठु राज्यदेखि टाढा हुनेछ।"
वै राज्यका सम्राटले कुरा बुझे। वास्तवमा छि ल्याङले कुरा घुमाउँदै आफैलाई सम्झाउनुभयो। राजाले टाउको निहुँर्‍याएर चूप लागेर एकछिन विचार गरे र चि ल्याङको कुरा उचित रहेको अनुभव गरेर चाउ राज्यमाथि हमला गर्ने योजनालाई त्यागे।
यसै कथाबाट यस उखानको उत्पत्ति भएको हो। यस उखानका माध्यमबाट मानिसहरुले व्यवहार र पूर्व निर्धारित लक्ष्य फरक भएको भन्ने कुरालाई इंगित गर्नेगरेका छन।